इच्छा तपाईकोः छोरा जन्माउने की छोरी ? यस्तो छ १०० % काम गर्ने चाइनिज सुत्र « गोर्खाली खबर डटकम
एजेन्सी । गर्भवती समाजमा छोरा या छोरी नजन्मिएकै कारण कैयौ परिवारमा द्वन्द्व हुने गर्दछन् । यसकै कारण कयै महिलाले मानसिक र शारिरीक यातना भोगिरहेका घट्नाहरु छन् । कतिपय महिलाले यसैको कारण सौता त कतिपयले सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपरेका घटनाहरु भेटिन्छन् ।
शुरुमा, चाइनीज विशेषज्ञद्धारा आविष्कार गरिएको यो प्रविधिमा धेरैले शंका गरेका थिए । तपाईंलाई पनि त्यस्तै लाग्न सक्छ । चाइनीज बैज्ञानिकको यो आविष्कार सन्दर्भमा दुविधा भएमा यो क्यालेण्डरलाई यसअघि जन्मिएको तपाईको छोरा–छोरीसँग समिक्षा गर्नसक्नु हुनेछ ।
त्यसका लागि तपाईको श्रीमती गर्भ रहँदाको उमेर र महिना एकिन हुनु पर्दछ । तपाईको छोरा या छोरी गर्भ रहँदाको अवस्थामा श्रीमतिको उमेर कति थियो ? कुन महिनामा श्रीमतिले गभर्धरण गरको हो ? अनि यो चार्ट हेर्नुस ठ्याक्कै मिल्ने छ । छोरी नै छोरीले भरिएका कैयौं परिवारले यो प्रविधि अपनाएर यतिखेर हाँसीखुशीका साथ जीबन बिताइरहेका छन् ।
तपाई पनि यो प्रविधि अपनाउनोस्, सुखी र खुशीका साथ जिउनोस् । सिन्धुपाल्चोकको चौतारा बजारका धेरै जनाले चीनमा आविष्कार गरिएको लिंग निर्धारण क्यालेण्डरकै विधि र प्रकृया अपनाएर इच्छा बमोजिमको सन्तान जन्माई सकेका छन् । आफ्नो इच्छा बमोजिमका सन्तान जन्माउन सफल भएका छन् । चौतारा–४ की राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठको परिवारमा लगातार चारवटी छोरीे जन्मेपछि छोराको आस नै मरिसकेको थिए । यो प्रविधि अपनाएपछि मनले चिताएको पूरा भएको राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ बताउँछिन् ।
चाइनीज बैज्ञानिकको यो प्रविधि सत् प्रतिशत मिलेको बताउँदै आफूले करिब दुईसय जनालाई सल्लाह दिएकोमा धेरै जनाबाट धन्यवाद पाएको र कतैबाट गुनासो नआएको राज्यलक्ष्मी बताउँछिन् ।